Endrik'io pejy io tamin'ny 30 Novambra 2019 à 19:29
Endrik'io pejy io tamin'ny 30 Novambra 2019 à 19:24 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 30 Novambra 2019 à 19:29 (hanova) (esory)
Araka ny [[Boky faharoan'ny Mpanjaka]] ao amin'ny [[Baiboly]] (2Mpanj. 17.23 --17.41) dia natao sesitany mankany amin'ny faritry ny [[Asiria|Fanjakana asiriana]] ny mponin'i Samaria mba ho fanasazian' Andriamanitra ny fahotan'izy ireo. Avy eo dia tsy fantatra intsony ny nanjo azy ireo fa nanjavona. Milaza ny Baiboly fa nisy mponina vahiny mampidirina tao Samaria mba hasolo ireo mponina izay natao sesitany. Ireo vahiny ireo hono no namorona ny fivavahana manafangaro fomba israelita amin'ny fomban'ny mpanompo sampy; ka niteraka ny Samaritana. Ny fivavahana samaritana araka ny ahafantarana azy amin'izao fotoana izao anefa dia tsy ahitana fomban'ny mpanompo sampy.
Misy hoatry ny mifanohitra anefa ny fitantaran'ny Baiboly ao amin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka: ireo mponina vao nampidirina ao amin'ny faritr'i Samaria ireo dia lazaina fa vahiny avy any ivelany, nefa voalaza koa fa nanao fanekem-pihavanana tamin'izy ireo i [[Iahveh]], toy ny hoe taranaky ny Israelita taloha izy ireo. Etsy andaniny dia nisy ireo izay lazaina fa natahiotranatahotra an'Andriamanitra, ary ankilany dia lazaina koa fa nanompo koa ny andriaaninyandriamaniny izy ireo.
Ny Baiboly anefa tsy tena piresakamiresaka mazava ny amin'ny fanjavonan'ireo fokon'i Israely folo. Ohatra, ny [[Bokin'i Jeremia]] (Jer. 41.5) dia mitatitra fa 150 taona taorian'ny faharavan'ny [[Fanjakan'i Israely (Samaria)|Fanjakan'i Samaria]], izayizany hoe raha vantany vao rava i Jerosalema tamin'ny taona 586 tal. J.K., dia tonga nitondra fanatitra ho an'ny [[Tempolin'i Jerosalema]] ny mponin'i Israely Avaratra: "lehilahy miisa valopolo tonga avy any Sikema (na Sekema), avy any Silo ary avy any Samaria, niharatra volom-bava, nandrovitra akanjo, sady nandididy ny hodiny (ho mariky ny fisaonana). Nitondra voanjavatravoan-javatra sy emboka manitra hatao fanatitra ho an'ny Tempolin'i Iahveh".
=== Fiheveran'ny Jiosy sy ny Kristiana ===
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/977853"